Nyaya Inonyanya Kubatsira Site Kugadzira Zvigadzirwa Zvevatadzi - Muchidimbu Kubva kuSemalt
Kukwezva kwewebhu kunowanikwa munzvimbo dzakasiyana mazuva ano. Iyo yakaoma uye inoda nguva yakawanda uye kuedza. Zvisinei, zvakasiyana-siyana zvekugadzira zvishandisi zvewebhu zvinogona kuita nyore uye kushandura yose inokambaira, zvichiita kuti data iwane nyore kusvika uye yakarongeka. Ngatitsvakei mazita ezvinyorwa zvine simba uye zvinobatsira zvebhu webwendeti kuti zvivepo - fell stoff lila mit. Zvose zvishandiso zvinorondedzerwa pasi apa zvakakosha kune vakugadziri uye mapurogiramu.
Inobatsira kubva kumazana kusvika kune zviuru zvevashandi vanoendesa mashoko anokosha pasina chero dambudziko. Iyi purogiramu inoshandisa Crawlera, iyo inyanzvi uye inoshamisa proxy rotator. Inotsigira kupfurikidza kwepamusoro-soro ye-bot-measure uye inokambaira ma web site akadzivirirwa mukati memasekondi. Uyezve, inokubvumira kunyoresa nzvimbo yako kubva kune dzimwe nzvimbo dzeIndaneti uye nzvimbo dzakasiyana-siyana pasina ruzivo rwekushandisa mahofisi, nenzira yekutenderera, chimbo ichi chinouya neHTTP API yakasarudzwa kuti uite zvinhu zviitike pakarepo.
Sekushandura-web based crawler, Dexi.io inokubvundisa uye kubvisa zvose mashomanana akare uye akapfuura. Inopa zvinhu zvitatu zvekushandisa: Extractor, Crawler, uye Pipes. Dexi.io ndeimwe yepamusoro uye inoshamisa yekutsvaga webhu kana kuti mapepa ekukwezva kwevashanduri..Iwe unogona kuchengetedza dhaka yakabudiswa mumashini yako / hard disk kana kuiwana yakagadzirirwa pavha yeDexi.io kwemavhiki maviri kusvika matatu isati yawana archived.
Webhose.io inoita kuti vashanduri uye webmasters vagone kuwana dhiyabhorosi dhiyabhorosi uye vanokambaira zvinyorwa zvose, kusanganisira mavhidhiyo, mifananidzo , uye kunyora. Iwe unogona kuwedzera kubvisa mafaira uye kushandisa shanduko yakawanda yezvinhu zvakadai saJSON, RSS, uye XML kuti uwane mafaira ako akachengetwa pasina dambudziko. Uyezve, iyi sarudzo inobatsira kuwana nhoroondo yezvakaitika kubva muchikamu cheNhoroondo yeChirangaridzo, zvinoreva kuti haungarasikirwi chero chinhu pamwedzi mishomanana inotevera. Inotsigira zvinopfuura makumi masere mitauro.
4. Ita. Io:
Vagadziri vanogona kugadzira mahwendefa ega ega kana kutumira data kubva pamamwe mapeji ewebhu ku CSV vachishandisa Import.io. Icho chimwe chezvinhu zvakanakisisa uye zvakakosha zvikuru zvekubhururuka kwekombiyuta kana zvigadzirwa zvekudhonza deta. Inokwanisa kubvisa mapeji 100+ mumasekondi uye inozivikanwa nokuda kwayo inoshandiswa uye ine simba API, iyo inogona kutungamirira Import.io purogiramu uye inokubvumira kuwana nheyo dzakarongeka zvakanaka. Kuti uwane ruzivo rwemudziri zviri nani, purogiramu iyi inopa mahara mahwendefa eMac OS X, Linux neWindows uye inokubvumira kudhonza data zvose mumagwaro uye zvigadzirwa zvemufananidzo.
Kana iwe uri nyanzvi yekugadzira uye uri kutsvaga zvakasimba purogiramu yakakwira yewebhu, unofanira kuedza 80legs. Icho chishandiso chinoshandiswa chinotora doro rakawandisa re data uye rinotipa isu nehupamhi hwekushanda webhu hwezvinhu pasina nguva. Uyezve, makumi mapfumbamwe nemakumi matatu anoshandisa nekukurumidza uye anogona kutamba nzvimbo dzakawanda kana mablog mumaminitsi mashoma. Izvi zvinokubvumira kuti uwane data yose kana kuti yakasarudzwa yemashoko uye nhepfenyuro yemasikirwo emabhidhiyo, RSS uye Atom feed, uye mararamiro emafambiro ega. Inogonawo kuchengetedza nheyo dzako dzakarongeka uye dzakanyatsogadzirwa mumafaira eJSON kana Google Docs.